‘कोरिया भाषा’ परीक्षाका लागि ९३ हजार आवेदन, कुन क्षेत्रका लागि कति? - Everest Dainik - News from Nepal
‘कोरिया भाषा’ परीक्षाका लागि ९३ हजार आवेदन, कुन क्षेत्रका लागि कति?
काठमाडौं, चैत १८ । ईपीएस अन्तर्गत कोरिया भाषा परीक्षाका लागि यस वर्ष ९३ हजार ३७६ आवेदन परेको छ । कोरिया भाषा परीक्षा का लागि आवेदन दिने अन्तिम समयसीमा आइतबार राति १२ बजेसम्मका लागि तोकिएको थियो । यही चैत्र ८ गतेदेखि ईपीएस भाषा परीक्षाका लागि आवेदन खुल्ला गरिएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस नेपाली कामदारले अब कोरियामै आफन्त भेट्न पाउने !
ईपीएस खाशाकाअनुसार अन्तिम दिन आइतबार रातिसम्म आवेदन दिएका ९३ हजार ३७६ मध्ये उत्पादनतर्फ ६३ हजार ४६७ र कृषि तथा पशुपालनतर्फ २८ हजार ८८९ आवेदन परेका छन् । गत वर्षभन्दा यस वर्ष करीब ११ भन्दा बढी आवेदन परेको छ । कोरियाले यसपाली १० हजार ५० जना नेपाली कामदार कोरिया लैजाने तयारी गरेको छ। परीक्षा जेठ २५ र २६ का लागि तय भएको छ।
ट्याग्स: EPS, south korea